ချည်ထုတ်ကုန် စက်ရုံ၊ တင်သွင်းသူများ - တရုတ် ချည်ထည် ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် povidone lodine swabstick ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်နှင့် အဖွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သန့်စင်သော 100% ချည်သားချည်သားသည် ထုတ်ကုန်ကို နူးညံ့ပြီး စုပ်ယူမှုသေချာစေသည်။သာလွန်ကောင်းမွန်သော စုပ်ယူနိုင်မှုသည် ဒဏ်ရာကို သန့်စင်ရန်အတွက် povidone lodine swabstick ကို ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ပစ္စည်း : 100% ချည်သား + ပလပ်စတစ်ချောင်း ပင်မပါဝင်ပစ္စည်းများ: 10% povidone-lodine နှင့် ပြည့်နှက်ပြီး၊ 1% ရနိုင်သော lodine အမျိုးအစား: မြုံ အရွယ်အစား: 10cm အချင်း: 10mm Package: 1pc/pouch၊ 50bags/box,1000bags/ctn ctn အရွယ်အစား - 44x31x35cm၊ 3pcs/pouch၊ 25bags/b...
တစ်ခါသုံး 100% ဝါဂွမ်းအဖြူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချည်လိပ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Dental Cotton Roll 1. စုပ်ယူမှုမြင့်မားပြီး နူးညံ့မှုရှိသော ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် 2. စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား လေးမျိုးရှိသည် 3. အထုပ်- 50 pcs/pack, 20packs/bag အင်္ဂါရပ်များ 1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်စုပ်ယူနိုင်သော တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဝင်ချည်များ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ နှစ် 20 လှိမ့်။2. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ရူပါရုံနှင့် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့၌ ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အရောင်ချွတ်ဆေးကို မည်သည့်အခါမျှ မထည့်ပါနှင့်။3. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အဆင်ပြေပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဒဏ်ရာများကို သန့်ရှင်းရေးအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဆေးရုံတွင်အသုံးပြုသည်...
jumbo ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုပ်ယူမှု 25g 50g 100g 250g 500g 100% စစ်မှန်သောချည်သိုးမွှေးလိပ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် စုပ်ယူထားသော ဂွမ်းလိပ်လိပ်ကို ချည်ဘောလုံးပြုလုပ်ရန်၊ ဂွမ်းပတ်တီးများ၊ ဆေးဘက်ဝင်ချည်ပြားစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုးသတ်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာများကိုထုပ်ပိုးရန်နှင့် အခြားခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။အလှကုန် လိမ်းရန် နှင့် ဒဏ်ရာများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။ဆေးခန်း၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ သူနာပြုအိမ်များနှင့် ဆေးရုံများအတွက် စျေးသက်သာပြီး အဆင်ပြေပါသည်။စုပ်ယူထားသော သိုးမွှေးလိပ်ကို 100% ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အရောင်ချွတ်သွားသည်...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောင်စုံ မြုံခြင်း သို့မဟုတ် ပိုးမွှားမရှိသော 0.5g 1g 2g 5g 100% ချည်သားစစ်စစ်
စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် Eco friendly biodegradable organic reusable 100% cotton pads
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 100% ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အလွန်စုပ်ယူနိုင်သော ပျော့ပျောင်းသော pads များသည် ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေ၊ ခြောက်သွေ့သော သို့မဟုတ် အဆီပြန်သောအသားအရေ အပါအဝင် အရေပြားအမျိုးအစားများအတွက် သင့်လျော်ပြီး သင့်ရေစိုခံမိတ်ကပ်အားလုံးကို ညင်သာစွာ၊ သဘာဝအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သင့်အသားအရေကို ချောမွေ့နူးညံ့ကြည်လင်စေပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဂွမ်းပုံနှစ်ထပ်ပတ်ထားသော ပတ်၀န်းကျင်ကို ခံစားလိုက်ပါ။စုပ်ယူအားကောင်းသော/စိုစွတ်သော/ခြောက်သွေ့/ပျော့ပျောင်းမှု။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် စတိုင်လ်အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းများစွာရှိပါသည်- စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ot...
eco friendly အော်ဂဲနစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖြူရောင်အနက်ရောင်ပိုးမွှားသို့မဟုတ်မမြုံမဟုတ်သော 100% ချည်သား swabs
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Cotton Swab/Bud ပစ္စည်း- 100% ချည်၊ ဝါးချောင်း၊ ခေါင်းတစ်ခုတည်း၊လျှောက်လွှာ - အရေပြားနှင့်အနာသန့်ရှင်းရေးအတွက်၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊အရွယ်အစား- 10cm*2.5cm*0.6cm ထုပ်ပိုးမှု- 50 PCS/အိတ်၊ 480 Bags/Carton;ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 52*27*38cm ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်အသေးစိတ် 1) အကြံပြုချက်များကို 100% ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကြီးမားပြီး ပျော့ပျောင်းသော ချောင်းကို 2) ခိုင်မာသောပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း 3) ဝါဂွမ်းဘူးတစ်ခုလုံးကို အပူချိန်မြင့်မြင့်ဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသေချာစေရန် 4) အကြံပြုချက်များနှင့် တုတ်များ၏အလေးချိန်ကို ချိန်ညှိပါ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုပ်စက် zigzag ဖြတ်တောက်ခြင်း 100% စစ်မှန်သောချည်သိုးမွှေးထည်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ညွှန်ကြားချက်များ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အရောင်ချွတ်ရန် 100% ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။၎င်း၏ texture သည် carding လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်နူးညံ့ချောမွေ့သည်၊ ၎င်းသည်အနာများကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့် swabbing၊ အလှကုန်လိမ်းရန်သင့်လျော်သည်။ဆေးခန်း၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ သူနာပြုအိမ်များနှင့် ဆေးရုံများအတွက် စျေးသက်သာပြီး အဆင်ပြေသည်။အလွန်စုပ်ယူနိုင်ပြီး ယားယံခြင်းမရှိပါ။အင်္ဂါရပ်များ- 1.100% အလွန်စုပ်ယူနိုင်သော ဝါဂွမ်း၊ သန့်စင်သော အဖြူရောင်။2. Flexibility၊ အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်...
ဂွမ်းသိုးမွှေးကို ချည်ဘောလုံးပြုလုပ်ရန်၊ ဂွမ်းပတ်တီးများ၊ ဆေးဘက်ဝင်ချည်ပြားစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုးသတ်ပြီးနောက် အခြားခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။အလှကုန် လိမ်းရန် နှင့် ဒဏ်ရာများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။အလွန်စုပ်ယူနိုင်ပြီး ယားယံခြင်းမဖြစ်စေပါ။ ဆေးခန်း၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ သူနာပြုအိမ်များနှင့် ဆေးရုံများအတွက် သက်သာပြီး အဆင်ပြေစေကာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ဝိုင်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုအများစု။